The leaked nkọwa nke Moto Z4 Play egosi na zuru ezu Gam akporosis
Moto Z4 Play ụdịdị leaked: 48 MP sensor, SD675 na ndị ọzọ kpughere
N'ọnwa gara aga, ụfọdụ leaked Moto Z4 Play sụgharịrị nke Lenovo. Mgbe nke a gasịrị, enwere ọtụtụ nkọwa banyere etiti etiti ụlọ ọrụ na-esote, nke ga-abụ nwanne nwoke nke tọrọ nke Moto Z4.
Ugbua ozi India abanyela Ozi dị oke mkpa na nkọwapụta Moto Z4, na-ekwu banyere ebe a na-amaghị aha a pụrụ ịdabere na ya.
Ekwe omume nkọwa nke Moto Z4 Play
Moto Z4 Play na-aza
Dika onu ohuru a si kwuo, Moto Z4 Play ga egosiputa ihuenyo nke 6.2-inch nke a gha eji edozi "U" nke a choputara ya na ihe nzuzu gburugburu ihuenyo. Ala bezel nke ekwentị nwere ike ịbụ ntakịrị oke. Ekwentị ga-onwem na ihe AMOLED ihuenyo na Ọ ga-abụ mbụ Motorola ekwentị na-akwado ndị na-ngosi akara mkpisiaka mmetụta.
A nụrụ kepu kepu na ụfọdụ ekwentị, dịka Cheta Meizu 9 ma ọ bụ Vivo V15 Pro, na-onwem na chipsets Snapdragon 675. Akwụkwọ ozi ahụ na-ekpughe nke ahụ Moto Z4 Play ga-akwadokwa otu chipset. A na-atụ anya na ọ ga-abata n'ụdị abụọ: 64 GB nke nchekwa + 4 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa + 6 GB nke RAM.
Enweghị ozi enwetara ma Moto Z4 Play nwere nhazi igwefoto abụọ ma ọ bụ otu oghere na azụ ya. Agbanyeghị, enwere ozi na oghere nke ga-adị na azụ nke Z4 Play. Ọ ga-enwe 48pipixel sensor, ma ọ gaghị abụ ihe mmetụta Samsung dị na Galaxy A8s y Ihe ngosi RedN 7 ọ gaghị abụ ihe mmetụta Sony dị na Sọlee 20. Kama nke ahụ, a na-atụ anya ka ụlọ ọrụ ahụ jiri ihe mmetụta S5KGM1SP Q Technology.
Asịrị nwere ya na ekwentị ahụ gụnyere ezigbo batrị ikike 3,600 mAh nwere nkwado ngwa ngwa. Ọ ga-abịa tupu arụnyere na A gam akporo 9 achịcha. Azụ ekwentị ga-egosipụta eriri nke magnet nke ga-enye ndị ọrụ ohere itinye ụdị Moto Mods dị iche iche, dị ka ihe ngosi ihe nkiri, mkpọ batrị, ọkpọ okwu boombox, na ndị ọzọ.
Enweghị ozi dị na ọnụahịa nke Moto Z4 Play. Banyere ụbọchị mmalite nke smartphone, a na-atụ anya na ọ ga-abụ ọkwa maka ọkara mbụ nke afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Moto Z4 Play ụdịdị leaked: 48 MP sensor, SD675 na ndị ọzọ kpughere
Twitter co-guzobere nkọwa otú tweet edezi nwere ike isi rụọ ọrụ
Otu esi emepụta ozi na mmeghachi omume na Telegram. (Ozi na bọtịnụ)